विजनेस – PuraKhabar
June 17, 2018 पुराखबर
काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि नेपाल आयल निगमले पनि डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ। निगमले पेट्रोल लिटरमा ३ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टीतेलमा दुई÷दुई रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो। घटेको मूल्य आइतबार राती १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने निगमले जनाएको छ। पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९३–९३ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। यसअघि निगमले पेट्रोल प्रति लिटर एक सय १३ र डिजेल, मट्टीतेल लिटरको ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो। हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने थपघट…
काठमाडौँ – तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति शाखा चार हजार…
June 6, 2018 पुराखबर
नेपालमा करिब दुई दशकयता मोटरसाइकल तथा स्कुटर चढ्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठूला तथा व्यस्त शहरहरुमा मोटरसाइकल दैनिक आवश्यकताको साधन बनिसकेको कारण मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको छ। कामगर्ने कर्मचारीहरुदेखि लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुका लागि मोटरसाइकल नभइ नहुने भइसकेको छ। झन् काठमाडौँ जस्तो स्थानमा त आफ्नो साधन नभए मानिसहरुले आवतजावतका लागि निकै समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसैले मोटरसाइकल किन्ने सोचमा भएकाहरुको जानकारी र सुविधाका लागि नेपालमा पाइने बिभिन्न ब्राण्डका र मूल्यका मोटरसाइकलहरुको बारेमा यहाँ विस्तृतरुपमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा धेरै समय अघिदेखि नै हिरो, होण्डा, बजाज, सुजुकि,…
बुटवलमा पनि जागे शेयर लगानीकर्ता, आन्दोलनको मैदान नछाड्न खबरदारी
June 6, 2018 June 6, 2018 पुराखबर
सरकारले ल्याएको पूँजीबजार बिरोधी कर नीतिको बिरुद्धमा बुटवलका लगानीकर्ता पनि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले शेयरलगानीकर्ता समूह बुटवल गठन गरी लगानीकर्तालाई मार पार्ने नीति तत्काल फिर्ता लिएर पूँजी बजार मैत्री हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बुटवलका शेयर लगानीकर्ताहरुले पनि आन्दोलनको मैदान नछाड्न राजधानीका लगानीकर्ता र संघसंस्थाहरुलाई सजग गराएका छन् । …………………. शेयर लगानीकर्ताहरुको संयुक्त संर्घष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रमहरुलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरि मोफसको विराटनगर र बुटवलका लगानीकर्ताले पनि सरकारले बढाएको पूँजीगत लाभकरको विरोध गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागबाट जारी गरिएको पत्रमा हकप्रद र…
उफ इन्धनको मूल्य फेरी बढ्यो, लिटरको कति ?
काठमाडौँ, १९ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट मूल्य बढेर आएपछि निगमले इन्धनको मुल्य बढाएको बताएको हो । निगमले शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा प्रति लिटर तीन/तीन रूपैयाँ बढाएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय १३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको ९५ पुगेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति केएल ७५ डलर बढाएको निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने…
आजदेखि कति बढ्दैछ कार र बाइकको मूल्य ?
May 29, 2018 May 29, 2018 पुराखबर
काठमाडौं – सरकारले बजेट ल्याउने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आज सो बजेट संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश हुँदैछ । अन्य कुराका अतिरिक्त अटोमोबाइल क्षेत्रमा चासो गर्नेहरुका लागि भने गाडीको मूल्य बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ । बजेट मार्फत सवारी साधनको क्षमता अर्थात सीसी अनुसार वर्गिकरण गरी करको दर बढाउने निश्चत प्रायः भएको समाचार आइरहेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सवारी साधनलाई उत्पादनसंग जोडिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममै सवारी साधनको कर बढाउने संकेत पटक पटक गर्दै आएका छन् ।…
May 23, 2018 पुराखबर
सघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी पाँचवर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ती आय दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। यो सरकारी घोषणाप्रति सर्वत्र प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। सरकारले भनेजस्तै अवका पाँचवर्षमा नेपालीको आय दोब्बर हुन्छ? अहिले एक हजार अमेरिकी डलर रहेको आय अबको पाँचवर्षमा दोब्बर हुनलाई केके आधारहरु चाहिन्छन्? यस बारेमा हामीले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। प्रतिव्यक्ती आय दोब्बर हुनको लागि सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिदर स्थिर मूल्य र चालु मूल्यमा मापन गरिन्छ। कुन मूल्यमा आय दोब्बर बनाउने भन्ने बारे सरकारले स्पष्ट नपारेकोले यसमा…
अबकाे एक दशक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अबकाे एक दशक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा सरकारको स्थायित्व तथा राजनीतिक स्थिरता कायम भएकाे दाबी गर्दै उनले अबकाे एक दशक पूर्वाधार निर्माणका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘स्टिलमिन्ट’ नामक भारतीय कम्पनीले शुक्रबारबाट आयोजना गरेको दुईदिने छड उद्याेगसम्बन्धी प्रदर्शनी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा भएका खनिज तथा फलामजन्य खानीको पहिचान गरी उत्खनन गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोगद्वारा स्वदेशी उद्याेगलार्इ अात्मनिर्भर बनाउँदै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने उनकाे धारणा…
कुन देशको मुद्राको विनिमयदर घट्यो?कुन देशको बढ्यो?हेर्नुस् आजको विनिमयदर(सुचिसहित)
May 7, 2018 May 7, 2018 पुराखबर
काठमाडौं । आज मिति २०७५ साल बैशाख २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमयदर अनुसार साउदी अरवको रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ४५ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । – कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ३० पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ४६ पैसा – युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ०४ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ २१ पैसा – मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ०७ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ २३ – कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९३ पैसा र विक्रिदर ९ रुपैयाँ ९९…
यो दुनियामा नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र ? दुध बेचेरै लखपति
May 6, 2018 May 6, 2018 पुराखबर
यो दुनियामा नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र ? साइप्रसकी एकजना महिला बच्चालाई स्तनपान गराउने आफ्नो दुध बेचेरै लखपति बनेकी छिन् । राफाएला लाम्प्रोउ नामकी ती महिला आफ्नो दुध बेचेर लाखौँ कमाउँछिन् । दुई बच्चाकी आमा लाम्प्रोउको दुध किन्नका लागि युवाहरु मरिमेट्छन् । खासगरी बडी बिल्डर हुन चाहने युवाहरुको बीचमा उनको दुधको उच्च माग छ । सात महिना अघि उनले दोश्रो बच्चा जन्माएकी थिइन् । बच्चाले स्तनपान गर्दा समेत आफ्नो वक्षस्थलको दुध चुसेर नसकेपछि उनले आफ्नो दुध कसैलाई दान गर्ने सोँच बनाइन् । सुरुमा उनले बच्चालाई स्तनपान गर्नका लागि दुध…